> Resource > Android > Sida loo hagaagsan Gmail Xiriirada in ay Android
Ma dooneysaa in aad u hagaagsan xiriirada si Android ka Gmail, laakiin ka heli lahayn meel looga baxo? Haddii aad kasoo gaarin dhacdhacaan aad la, aad tahay meel sax ah. Halkan, qodobkan inta badan waxay kuu sheegaysaa sida aad u hagaagsan warsan xiriirada ee Gmail si Android tababaraha sahlan in la isticmaalo Android - Wondershare MobileGo for Android ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Tababaraha Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad u hagaagsan xiriirada in xisaabta Gmail aad Android inay buugga cinwaanka Android. Haddii aad qabto lahayn xisaab Gmail on aalad Android, tababaraha this Android sidoo kale kaa caawin doona inaad u hagaagsan xiriiro waxa ku jira in ay Android.
Sida loo hagaagsan xiriirada Gmail si Android
Download Tababaraha this Android on your computer hore. Tutorial hoose waxay ku saabsan tahay syncing xiriirada Gmail in qalab Android aad la Windows ka verison tababare tan Android - Wondershare MobileGo for Android.Then, ogolaanaysaa 'tutorial fududaynay wada iskaan.
Tallaabada 1. Run Tababaraha this Android oo xirmaan telefoonka aad Android inay PC
Ku rakib oo ay maamulaan Tababaraha this Android aad kombuutarka. Connect qalab Android si aad u PC via cable USB ama via Wi-Fi. Ka dib markii tababare tan Android lagu ogaadaa qalab Android aad, waxaad ka arki kartaa faylasha aad Android uu furmo suuqa pop-up hoose.
Fiiro gaar ah: Tababaraha Tani Android - Wondershare MobileGo for Android aad ogolaanaysaa u hagaagsan Gmail xiriirada qalabka kala duwan Android. Hubi qalabka Android ay taageerayaan si ay u helaan Macluumaad dheeraad ah.
Tallaabada 2. xiriirada nidaameed ka Gmail si Android
Haddii aad leedahay xisaab Gmail ku saabsan Android, waxaad si deg deg ah u hagaagsan karo xiriirada waa in aad buug cinwaanka Android. Tubada "Meeshay"> "Accounts & hagaagsan". Tubada Gmail iyo dooran "nidaameed Xiriirada". Markaasuu "nidaameed Hadda". Tababaraha Tani Android bilaaban doono xiriirada syncing in aad Gmail si aad Android.
Ka dib markii in, waxaad riixi kartaa "Xiriirada" khaanadda bidix. In geed ay buugga, waxaad ka arki kartaa koox Gmail ah. Dhammaan xiriirada in aad kaliya haatan synced jiraan.
Haddii aanad lahayn xisaab ah Gmail aad Android, waxaad weli u hagaagsan karo xiriirada Gmail si telefoonka aad Android. Saxiix in aad xisaabta Gmail. Guji "Gmail"> "Xiriirada". Dooro xiriirrada in aad rabto in aad u hagaagsan in qalab Android. Guji "More". In ay menu hoos-hoos, guji "Dhoofinta ...".
Markaas, doortaan qaab vCard ah. Guji "Dhoofinta" si loo badbaadiyo xiriirada on your computer.
Markaas, in suuqa kala xiriir ah MobileGo for Android ah, dooro kooxda ah si loo badbaadiyo xiriirrada Gmail. Guji "Import / Dhoofinta"> "contacts Import ka computer". On liiska jiido hoos midig, doortaan "ka file vCard". Dul meesha aad badbaadin file vCard oo ku soo dhoofsadaan.
Taasi oo dhan, waayo, taasu xiriirada u hagaagsan Tababaraha Android ka Gmail si Android. Intaa waxaa dheer, waxa aad awoodi kartaa in ay hagaagsan xiriirada in xisaab kale, sida Facebook, in qalab Android. Isku day Tababaraha this Android inay wax u sameeyo!
Android App rakibayo: fududahay in la rakibo / Dhoofinta / uninstall Apps in Android ka PC
2 Siyaabaha kaabta iyo Soo Celinta Huawei Phones
Sidee si ay u gudbiyaan Content ka Samsung in Samsung
Top 6 Samsung Xiriirada Tool kaabta in Hayso Xiriirada Secure
Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka ka Memory Gudaha ee Android Devices
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Messages on Samsung Galaxy Ace
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Android in Outlook